3 MDC Alliance cllrs eye Harare mayor’s post – NewsDay Zimbabwe
Previous article ‘Govt interference bled Bulawayo council’
Next article DJ Blesh to release ‘electric’ album
Comment…Ndima yekutanga irikuti vaMakone vakakodzera. Ndima yepiri irikutaura nezvekuti havana kodzero. Apa ndezvipi chaizvo. Kana kuti ndini ndirikutadza kunzwa icho chakawuya nengarava.
Viva Jacob Mafume, brilliant administrator.
Comment…vamakone tinovimba nemi mayor akashinga ndiye ari kudiwa